ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ဖျက်မလား၊ တက်ခေတ် နတ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်မလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ဖျက်မလား၊ တက်ခေတ် နတ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်မလား
ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ဖျက်မလား၊ တက်ခေတ် နတ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်မလား
Posted by kp on Jul 17, 2011 in Copy/Paste | 35 comments
ယခုလ အတွက် ရင်ကို ထိမှန် စေသော သတင်း နှစ်ပုဒ် ရှိသည်။ တစ်ပုဒ်က နိုင်ငံခြား
သတင်း မီဒီယာသည် စထရိတ်တိုင်းမ်တွင် ဖော်ပြပါရှိခဲ့သော တရုတ် တိုင်ပေတွင် “နှစ်
ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ အောင်ပိတ် ပင်ထား သော ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း ပြန်လည်ဖွင့်
လှစ်တော့မည်” ဟူသောသတင်း။ နောက် တစ်ခုက ပြည်တွင်း မီဒီယာတို့တွင် ဖော်ပြ ထားသော
“အနှိပ်ခန်း၊ ကေတီဗွီတို့ကို ပြင်း ပြင်း ထန်ထန် အရေး ယူမည်”ဟူသောသ
တင်းအကြောင်းအရာကတူသည်။ အချိန် ကာလကလည်း သိပ်မကွာ။ မတူညီ သည် က
ပိတ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်း သဘောတရားနှစ်ခု က လားလားမျှမတူ။ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး
ကို ဆန့်ကျင် နေသည်။
စထရိတ်တိုင်းမ်တွင် ပါဝင်သော သတင်း ကို သေသေချာချာဖတ်ရှုပြီးနောက် အချက်
သုံးချက်ကို တွေ့မြင် ခံစားရသည်။ ပထမ တစ်ချက်က အာဏာသုံး၍ ပိတ်ပင်ထား သော
နှစ်ပေါင်း ၂၀ နောက် ကွယ် ကဆိုး ကျိုး။ ဒုတိယ တစ်ချက်က လူထုဆန္ဒ။ နောက် တစ်ချက်က
တိုင်းပြည်ဝင်ငွေ ဤသုံးချက် ကို လှစ်ခနဲ မြင်လိုက်ရသည်။ ဒုတိယ အချက်ဖြစ်သော
လူထုဆန္ဒကို အရင်ပြော လိုပါသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာအောင် ပိတ်ပင်ထားသော
ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ဖွင့်ချင်၍ ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ပေးခြင်း မဟုတ်။ လူထုဆန္ဒ
အပေါ်အခြေခံပြီး အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှ နေ၍ ပြန်လည်ဖွင့် လှစ်ပေး
ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။ တရုတ်(တိုင်ပေ) တွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာက လူထုစစ် တမ်း
တစ်ရပ် ကောက်ခံ သည်။ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စဖွင့်ပေးသင့် မဖွင့်ပေး သင့်ကိုဖြစ်သည်။
ပြည့်တန်ဆာကိစ္စလုံးဝမရှိသင့်ဟု ဆန္ဒပြုသူ တရုတ်(တိုင်ပေ)ပြည်သူ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း
သာရှိသည်။ ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်သော ပြည်သူတို့က သင့်လျော်သော စည်းမျဉ်း
စည်းကမ်းများချမှတ်၍ ခွင့်ပြုသင့် ကြောင်း အဆိုပြုကြသည်။ ကန့်သတ်နယ်မြေများ
စနစ်တကျသတ်မှတ်၍ ရှင်သန်ရပ်တည် ခွင့်ပြုလိုကြသည်။
ပထမဖော်ပြခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာအောင်ပိတ်ပင်ခဲ့ခြင်း၏ နောက်ကွယ် က
ဆိုးကျိုးကို ပြောရလျှင် တရားမဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟူ သောအချက်အလက်ပင်ဖြစ်သည်။ တရား
မဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ နောက်ကွယ်တွင် အတင်း အကျပ် ထိန်းချုပ် စစ်ဆေး အရေးယူ မှုမှ
လွဲ၍ ကျန်တာဘာမှ မတတ်နိုင်။ အမှောင်ကမ္ဘာ တွင် ဆက်လက် ရှင်သန်နေမည်ဖြစ်တော့ ၏။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုမည်သို့မျှ ပြု၍ရတော့မည်မဟုတ်။ အရေအတွက် ကိုလည်း
မသိရ။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှ အသွေးအသားရောင်းချသူတို့အပေါ် ကြည့် ရှုစောင့်ရှောက
လိုသော်လည်း တရားဝင် မဟုတ်၍ လုပ်၍မရသောကိစ္စရပ်များစွာ ရှိလာသည်။
စာရင်းဇယားအရေအတွက် လည်း ပျောက်ကုန်သည်။ ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာ သားတို့အား လူမျိုး
တုံးပျောက် ကွယ်စေမည့် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဆိုး အပေါ်
အတင်းအကျပ်နှိပ်ကွပ်ပိတ်ပင်စေ ခြင်းက တားဆီးကာကွယ် နိုင်သောအ
ကြောင်းတရားအဖြေမှန်ဟုတ်ပါ၏လော။ မေးခွန်း ထုတ်စရာဖြစ်လာပါတော့သည်။
တရုတ်(တိုင်ပေ)အကြီးအကဲတို့ နှစ် ပေါင်း ၂၀ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုအရေးကို
သိမြင်လာပုံ ရသည်ဟု ထင်မြင်မိ၏။ တရုတ် (တိုင်ပေ)ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီး အကဲ
လျူဝန်ရှဂ်က ယခုလိုဆိုပါသည်။ “အစိုးရက ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးမည်။
ပြဋ္ဌာန်းပြီးလျှင် ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ငန်း လိုင်စင်ရယူပြီး တရားဝင် ရပ်တည်ရတော့
မည်။ တရားမဝင်ဖွံ့ဖြိုးနေခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍ လက် ရှိလုပ်ကိုင်နေသော ပြည့်တန်
ဆာများ၊ ခေါင်း များအားလုံး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရမည်။ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီး
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခ တစ်လ ၁၀ ဒေါ်လာဝန်းကျင် ခန့်သာကုန်ကျမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်
တရား မဝင်လုပ်ကိုင်သူပြည့်တန်ဆာတို့ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ထိရောက်စွာအရေးယူမည်”
ဆို သည့်အကြောင်းကို ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာပိတ်ပင်ထား သော် လည်း
တရားမဝင်ဖွံ့ဖြိုးနေသည့် ပြည့်တန် ဆာလုပ်ငန်းတွင် လိုင်စင်မဲ့ တစ်သိန်း
ကျော်လုပ်ကိုင်နေသည်ဟူသော စာရင်းဇယားရှိနေသည်မှာ တရုတ်(တိုင်ပေ)၏
ယင်းအပေါ်အ ခြေခံ၍ တရုတ်သုတေသီတို့က ခန့်မှန်းသုံး သပ်ထားသည်မှာ တရုတ်(တိုင်ပေ)
တွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ နှစ်စဉ် ဝင်ငွေမှာ သန်း ၈,ဝ၀ဝ
ကျော်ပျမ်းမျှရှိနေ ကြောင်း ခန့်မှန်းသုံးသပ်ထားကြသည်။ ယခု
အဆိုပါလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကို စနစ် တကျဥပဒေထုတ်ပြန်၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး မှု
ပုံမှန်ပြုလုပ်၍ အခွန်အတုပ် စနစ်တကျ ကောက်ခံကာ ၇၀ ကျော်သော တရုတ်
(တိုင်ပေ)ပြည်သူတို့၏ဆန္ဒကို ဦးစားပေး တော့မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေး
ရှုထောင့် အပေါ်အခြေခံကာ ပိတ်ထားသော တံခါးချပ်၏နောက်ကွယ်က အမှောင်တို့ကို
တံခါးဖွင့်၍ အလင်းဖြင့်ခွင်းစေတော့မည်။ ဤသည်ကား စထရိတ်တိုင်းမ်မီဒီယာ
တွင်ပါဝင်သော သတင်းအချက်အလက်အ ပေါ် အခြေခံ၍ရှုမြင်ခြင်းဖြစ်၏။
အနှိပ်ခန်း၊ ကေတီဗွီတို့ကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် အရေးယူမည်ဟူသော ပြည်တွင်း သတင်း၏
နောက်ကွယ်က တကယ့်ဖြစ်ရပ် တို့ကိုဆက်လက်လေ့လာစေ့ငုမိသည်။ ဟုတ် သည်။ ရန်ကုန်
တစ်မြို့လုံးလိုလိုကို တစ်ချိန် က ညလုံးပေါက်မီးလင်းနေသော အခန်းတို့
မှောင်အတိကျ သွားသည်။ လူကြီး၊ လူလတ် ပိုင်းတို့အကြား ရေပန်းစားသော နေရာတချို့
တွင်သာစုပြုံ၍ လူစည်ကား နေတော့သည်။
မြို့နယ်တိုင်း မြို့နယ်တိုင်းလိုလိုတွင် တစ်ချိန် က တိုးတိုးတိတ်တိတ်
ကျိတ်၍စည်ကားခဲ့ သော တိုက်ခန်းနေရာတို့ ဆိတ်ငြိမ်ကုန် တော့သည်။ အလွန့်အလွန်
ရှားပါးလှစွာ ဖြင့် အခန်းငယ် တချို့သာ မှိန်ပျပျအလင်း ရောင်အောက်တွင်
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေ သည်ကို တွေ့ရသည်။ ဤတွင် တက္ကစီသမား၊ အငှားယာဉ် မောင်းတစ်ဦးက
ယခုလိုဆိုလာပါသည်။ “အစ်ကိုရယ် …ဒါတွေတင်းတင်း ကျပ်ကျပ်ပိတ်လိုက်တော့
ဘာတွေဖြစ်လာ သလဲသိလား။ ညနေစောင်းရင် အကုန်လုံး လမ်းပေါ်ထွက်လာကြရော။ မယုံရင် ၄
နာရီခွဲ၊ ၅ နာရီ လောက်…ကိုလာကြည့် ပါလား။ အယောက် ၂၀ဝ လောက်ရှိတယ်။
ထွက်လာကြတာများ…” ငယ်ထိပ်ကို မြွေပေါက်သကဲ့သို့ ခံစား လိုက်ရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းလမ်း မှန်ပါ ၏လော။ ဆက်လက်စဉ်းစားမိသည်ကမည်သည့်နည်း
ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်က ကောင်း သနည်း။ အရေအတွက်၊ စာရင်းဇယားကို မည်
သို့ကောက်ယူသိရှိနိုင်မည်နည်း။ အရေအတွက် ပမာဏမသိရှိရဘဲ မည် ကဲ့သို့
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးမည် နည်း။ အရေးကြီး သော သူတို့ကို ကျန်းမာ
ရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာ မပို့ချနိုင်ပါက
လူမျိုးတုံးစေမည့် ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို မည်သို့တွန်းလှန်ရပါ အံ့နည်း။
လက်ရှိတရုတ်(တိုင်ပေ)သည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာပိတ်ပင်ခဲ့ရာမှ ဤကိစ္စကို ယခု
တံခါးဖွင့် ပေးလိုက်သည်။ တရုတ်(တိုင်ပေ) ကဲ့သို့ပင် အခြားသောနိုင်ငံများစွာ
တို့သည် လည်း ပြည့်တန်ဆာကို စနစ်တကျလိုင်စင် ရယူလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည်။
စနစ်တကျကျန်း မာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးသည်။ ထို့ နောက် ပြည့်တန်ဆာ
ကိုအမှီပြု၍ တိုင်းပြည် ၏ GDP တိုးစေသည်။ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ
များစွာရှာဖွေသောကဏ္ဍတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်လာ သည်ကို တွေ့ရသည်။ “ပြည့်တန်ဆာဖြင့် တန်ဆာ
ဆင်ခြင်း”ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ အတွေး တို့ဆက်လက် ဆင့်ပွားမိပြန်သည်။ “ကျွန်ုပ်
တို့သည် ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ဖျက်မည် လား။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ/ အေအိုင်ဒီအက်စ်ဟူ
သော တက်ခေတ်နတ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်မည် လား” ပညာရှင်တို့ ခေါင်းချင်း ဆိုင်ရပေ
ရိုးရာလေး – ပြည့်တန်ဆာကို တိုက်ဖျက်မလား၊ တက်ခေတ် နတ်ဆိုးကို
တက်ခေတ် နတ်ဆိုးက ဘာလဲဗျ ?
သူက.. ပြည့်တန်ဆာနဲ့ကာလသားရောဂါအကြောင်း ရေးတယ်လေ….။
ဒီခေတ်ဆိုရင်တော့.. ဒီတက်ခေတ်ရဲ့ နတ်ဆိုးက..အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။
(စစ်)တပ်ခေတ် နတ်ဆိုးလို့ အထာနဲ့ရေးထားတာပါကွယ်….
AIDS လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ပြည်တန်ဆာတွေကိုလက်ညိုးထိုးလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေ…
ဒီလုပ်ငန်းက ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိခဲ့ပါတယ် .. စည်းစနစ် တကျ ရှိတာ နဲ့ မရှိတာ ကွာနေတာပါ
သတ္တ၀ါရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် အိပ်စားကာမ ဆိုတာ ပါလာတယ် .. လူမှာက အသိတရားထိန်းချုပ်မှု ရှိတာပဲ ကွာတယ် .. လူတွေက လူမြင်ကွင်းမှာ ကာမအမှု မပြုကြဘူး ..တိရစ္ဆာန်မှသာလျှင် မြင်ကွင်းမရှောင် ဖြစ်ကြမှာ
ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတောင်မှ ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ရှိခဲ့တယ် .. ဒါပေမယ့် စနစ်တကျပါ .. ကြိုတင်ချိန်းဆိုချက်တွေ ဘာတွေနဲ့ .. (အဲဒီကတည်းက လူကြီးတွေ ကဲကြလို့ ဇီဝက ဆိုတဲ့ သမားတော် မွေးဖွားလာတာလေ) .. နှုန်းထားနဲ့ .. အလှည့်ကျနဲ့ ..
ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်း ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ဘယ်လို ရှိတယ် ဆိုတာ တစိတ်တပိုင်း ပါနေတယ် ..
ဒီလို တရားဝင် လုပ်တော့ အဲဒီလူတွေက ကိုယ့်ကျန်းမာရေး မထိခိုက်အောင် စည်းစနစ်နဲ့ လုပ်ကိုင်ကြတယ်လို့ မြင်တယ် .. ရောဂါကိစ္စ .. ကိုယ်ဝန် ကိစ္စ .. အစရှိတာတွေကို ကိုယ့်ဖာသာ ထိန်းသွားကြတယ်
အဓိက က ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး ဆိုရင် ရောဂါရလာတာတောင် လူမသိ သူ မသိ .. ကူးစက်မှုကလဲ လူမသိ သူမသိ .. ပျံ့နှံ့မှုကလဲ ထိန်းချုပ်မရ ..
အားလုံးကိုတော့ အကျိုး အပြစ်တွေ တွက်ဆပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်
ပို့ စ်ကောင်းလေးပါ။ကျေးဇူးပါနော်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံ မှာ legally prostitution ဖြစ်သင့်ပါပီ။သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေ. ပိုင်စခန်း တို့ နယ်ထိန်း တို့ ကို လက်သိပ်ထိုး ငွေ ကမ်း လုပ်နေမယ့်အစား တရားဝင် လုပ်လိုက်တော့ အမျိုးသားကျန်းမားရေးအတွက် ပိုစဉ်းစားလို့ ရမှာပေါ့။ခုတော့ ဘယ်လောက်အရည်အတွက်ရှိလဲမသိရ။ဘယ်နှစ်ယောက်ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရလဲ ဖုံကွယ်ထား ဆဲ။ဒါတွေက အနာဂါတ်အတွက် စိုးရိမ်ရေမှတ်ပါ။
ဒီစာရေးသူနှင့်တကွ MG ရဲ့ စာရေးသူများကို အကြံလေး ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီဆိုက်မှာက စည်းကမ်းနံပါတ် (၄) မှာ ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများကူးတင်ခွင့်မရှိ .. လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒီစာမူလို အတွေးအခေါ်ပါတဲ့ လက်ရှိကာလနဲ့လဲ ကိုက်ညီတဲ့ စာမျိုးကတော့ တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးရှိတာလဲ အမှန်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီလို အများအကျိုးရှိမယ့်စာမျိုးကို တပိုင်းစီ code လုပ်ပြီး စာရေးသူရဲ့ အမြင် အာဘော်လေးတွေပါ ထည့်ရေးပြရင်ဖြင့် –
အကျိုးရှိတဲ့စာကို ဖေါ်ပြရာလဲရောက်၊ ဆိုက်ရဲ့စည်းကမ်းနဲ့လဲ ညီညွတ်ပြီး ၊ စာရေးသူနဲ့လဲ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးဖြစ်သွားမှာမို့ “သားရွှေအိုးထမ်းလာတာမြင်လိုပါတယ်” ဆိုတဲ့ဆုတောင်းလိုမျိုး အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံသွားမှာပါ။
မိမိတသက်လုံး ပြည့်တန်ဆာများနှင့် လုံးဝ ပျော်ပါးဘူးခြင်းမရှိသူအနေနဲ့ နဲနဲ ၀င်ပြောလိုပါတယ်။
ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ မိမိအိနြေ္ဒကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ မိန်းကလေးများလိုတော့ တန်ဘိုးရှိတဲ့မိန်းကလေး မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။
ဒါပေမယ့်လို့ ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ အလွန်အောက်တန်းကျပြီး လူထဲမ၀င်ထိုက်တဲ့
ရောင်းချင်တဲ့သူကရောင်း – ထိမ်းသိမ်းချင်တဲ့သူကထိမ်းသိမ်းပေါ့။
ဒါကြောင့် ကျုပ်အဖို့မှာတော့ ပြည့်တန်ဆာကို မနှိမ်ဘူး၊ ခေါ်ပြောဆက်ဆံဘို့ ၀န်မလေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်သားနဲ့တော့ မပေးစားဘူး။ ကျုပ်သမီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ လက်မခံဘူး။ (သတ်တောင်ပစ်ဦးမယ်)။
ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ပျော်ပါးဘူးခြင်းမရှိတာကတော့ ကျုပ်အယူအဆနဲ့ကျုပ် တမင်ရှောင်တာ။ အဲဒါကြောင့် ညံ့တဲ့ကောင် ငတ် ပေတော့ပေါ့လို့ (ကျုပ်သူငယ်ချင်းတွေပြောသလို) ပြောမယ့်လူရှိရင်လဲ –
ဟုတ်ကဲ့ …. ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အငတ်ခံပါတယ်ဗျာ..။
ဒါပေမယ့်လို့ ကျုပ်ဘာသာအငတ်ခံလို့ ပြည့်တန်ဆာများနဲ့ပျော်ပါးတာ မကောင်းဘူးလို့တော့ ကျုပ်ဘယ်တော့မှမယူဆဘူး။
အိမ်ထောင်ရှိသူက ပျော်ပါးရင် သူ့အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်မှာ တရားမျှတမှု့မရှိဘူးလို့တော့ ယူဆပါတယ်။ (သူ့မိန်းမသာ ယောက်ျား ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ပျော်ပါးတယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ့်သူလဲ မရှိနိုင်သလောက်ပါပဲ။)
မရမယ့်အတူတူ ချောင်ထဲမပို့ပဲ ၊ သင့်လျှော်ရာ နေရာ စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ သတ်မှတ်ထိန်းကွပ်ပြီး မျက်စေ့အောက်မှာ ထားတာသာလျှင် အသင့်လျှော်ဆုံးပါပဲ။ အဲသလို တရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်လို့ မိန်းမလိုက်စားမယ့်လူ ပိုများလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
စားမယ့်လူက ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် စားကိုစားမှာ …။
အငတ်ခံမယ့်လူကလဲ သူ့စိတ်နဲ့သူ အငတ်ကိုခံမှာ …။
လောကမှာ ပြည့်တန်ဆာထက်ကောင်းတာ အများကြီးရယ်…။
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်။ ခင်ဗျားလို ၀ယ်မစားပဲ အငတ်ခံတဲ့လူတွေက တောင်းစားတာ ၀ါသနာကြီးတယ်လို့ 
ကြားဖူးတယ်။ ပြည့်တန်ဆာထက် ကောင်းတာတွေ အများကြီး ဆိုတော့….ဟဲဟဲဟဲ အကောင်းစားတွေပဲ
တောင်းစား မနေနဲ့ လေ…
သူကြီးပြောဘူးတဲ့ ဘိုမရုပ် လို့ မပြောတာ …။
ပြည်.တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေကို တိုက်ဖျက်၇င်တော.
မုဒိမ်းမှုတွေ များလာမယ် ထင်တယ်နေားးးး
မုဒိန်းကျင့်သူတွေထဲမှာ တချို့က တမင်မုဒိန်းကျင့်ချင်တာ ။
တချို့ကတော့ မန်းမနဲ့ ဆက်ဆံချင်လို့ လွယ်တာလုပ်မိသွားတာ။ အဲသသည်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ပြည့်တန်ဆာ လွယ်လွယ် ပေါပေါ သန့်သန့် ရရင် မုဒိန်းဘယ်ကျင့်တော့မလဲ။
ဂေါတမဘုရားကတော့.. ပြည့်တန်ဆာကပ်တဲ့ဆွမ်းကို မင်းသားတွေထက်အရင်လက်ခံလိုက်ဖူးတယ်တဲ့..။
အဲဒါ..မင်းသားတွေက..ပြည့်တန်ဆာဆီက.. ဆွမ်းဦးကပ်ခွင့်ပြန်တောင်းတာ.. ပြည်တန်ဆာက..မပေးလို့..ဆွမ်းတူတူကပ်ခွင့်ကိုတိုင်းပြည်တ၀က်နဲ့တောင် လဲယူရတယ်ဆိုပဲ..။
ဟုတ်သည်မဟုတ်သည် ထက်… ဗုဒ္ဓက… ပြည့်တန်ဆာကို ဘယ်လိုသဘောထားသလည်း ပေါ်လွင်စေချင်လို့ပါ..။
ဗုဒ္ဓကို ဆွမ်းကပ်လုပ်ကြွေးချင်လို့.. ယောင်္ကျား(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်သူ)ကို .. သီရိမာ(ပြည့်တန်ဆာမ)နဲ့ လွတ်ပေး(သူကိုယ်တိုင်ငှားပြီးခေါ်ပေး)ထားတယ်..။
ဘယ်အရာမှ သူ့အတိုင်းသား ဖြစ်လာတာ မဟုတ်လေတော့ အင်း ….။ တရားဝင်ပေးလိုက်ရင်လည်း အင်းးး… ပေးမယ်လည်း မထင်ပါဘူး..။ အရက်ဆိုင် လိုင်စင်ပေးထားတာတောင်မှ ဆိုင်စင်မဲ့ အရက်ဆိုင်တွေ အဖြူလိုင်စင်နဲ့ အနီ ရောင်းနေတာတွေ…။ ဆိုင်ကယ်တွေ လိုင်စင်ပေးနေပေမဲ့ ဘလက်တွေ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေတာတွေ..။
ခုတော့ မှတ်သားလောက်ပါတယ်…။ စည်းကမ်းမဲ့ဆိုင်ကယ် တွေကို ရိုက်တဲ့ ဒဏ်ကြေးတွေ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ…။ အရင်က စည်းကမ်းတစ်ချက်မလိုက်နာရင် သူတို့ အခေါ်တစ်မှုကို 21500 ကျပ် ရိုက်နေရာက 14-7-2011 နေ့က စပြီး တစ်ခုအဲ တစ်မှုကို 105000 ကျပ်သို့ တိုးမြှင့်ဒဏ်ရိုက်နေပါပြီ…။ တိုးတက်လာတာပေါ့…။
ပြည့်တန်ဆာ ရှိသင့်မရှိသင့် ပြောရရင် ဒီထက် ပို ရှည်မယ် ထင်ပါတယ်
နာမည်ကြီး အဆိုတော် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တွေ တောင် ဘာလိုလို ညာလိုလို အသံ ထွက်သေးတာပဲ နော
အမိန့် ရတာ နဲ့ မရတာနဲ့ ပဲ ကွာမယ် လို့ ထင်ပါတယ်
အပြုစု အယုယလေးတွေကို အလိုရှိကြပါသလား
ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ မိတ်ဆွေများအကြိုက် ခပ်မိုက်မိုက်လေးများကို
အပီပြင် ပြုပြင်စစ်ဆေးပြီး သန့်သန့်လေးများဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်
စိတ်တိုင်းကျ သန့်သန့်လေးဌာနကို ကြွခဲ့ကြပါ
စဉ်းစားပါအုံးမယ် နောက်အနှစ်၂၀ လောက်ရှိရင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ တကယ်ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်နိုင်ရင်တော့ ကောင်းပါတယ်
သိ တတ် နားလည် ကျွမ်းကျင်မှု ဖြင့်သာ
ပြည့်တဆာတွေ ခြံဝယ် ၊ ကားဝယ်နိုင်တေ့ာမဲ့ခေတ်ရောက်တော့မှာပါလား နော်
ဟမ်….. မောင်ကျောက်ရဲ့ ဆရာကြီး ငယ်ငယ်က အိုက်စကရင် ကြွေးတာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က ရေး၊ သူကြီးက ဖွ၊ ခုတော့ ဂဇတ်ရွာထဲ သတင်းရောက်လာပြီ……. ဟီ ဟိ
တလောက ဂျာနယ်တခုမှာထင်တယ် မြန်မာပြည်တွင်း ပြည့်တန်ဆာ မှတ်ပုံတင်ခွင့်နဲ့ဆိုင်လို့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ဖတ်ရတယ်။ မှတ်မထားမိလို့ ပြန်ကူးမပြနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီစာက မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို ဆန့်ကျင်ထားတာ။ တချက်စဉ်းစားဖို့က ပြည့်တန်ဆာကို မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပေးလည်း အများစုသည် နေရာသတ်သတ် မှတ်မှတ် ထားလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့။ ဖာဆိုတာ အသစ်ဖြစ်မှ ဈေးကောင်းရတယ်၊ တနေရာထဲမှာ အကြာကြီးနေရင် ဟောင်းသွားလို့ စားကျက် ခဏခဏ ပြောင်းပေးရတယ်။ ကြားဖူးကြမှာပေါ့ အသစ်လေး အသစ်လေးဆိုတာ တကယ်တော့ အများစုက စီနီယာတွေပါ။ ရန်ကုန်ကဟာတွေ ကော့သောင်းတို့ ဘာတို့ဖက်သွားရင် နယူးလေးတွေ ဖြစ်ကုန်တာပဲ။ အဲဒါကို ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ။ သဂျီးဂဒေါ်အလစ်မှာ သဂျီး ကြေးကြီးပေး ဆော်နေတဲ့ အယ်လ်အေ ပက်ကင်ဆိုတာ တကယ်တော့ နယူးယောက် အိုးလ်ဒ်ဆားဗစ်ကြီးဗျ.. သနားလို့ မပြောဘဲနေတာ.. အခုတော့ သောက်မြင်ကပ်လို့ ဖော်လိုက်ပြီ။ :harr:
ဘရာဇီးလ်သူက.. သူ့အပျိုရည်ကို.. ရောင်းပြန်ပြီတဲ့..
Rebecca Bernardo, 18, of Sapeacu, Brazil, is attemptingto sell her virginity to the highest bidder in hopes of raising enough money to cover …
သနားစရာ ဆင်းရဲသူ ကလေးမလေးပါ ။
လေဖြတ်နေတဲ့ အမေအိုကြီးကို တစ်ဦးတည်း လုပ်ကျွေးနေရရှာတာပါ ။
အခုလဲ အဲဒီ အမေအိုကြီး အတွက် သူနာပြုဖိုး ဆေးဖိုးရှာတာပါ ။
အခုထက်ထိ offer က ၃၅ ၀၀၀ ဒေါ်လာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့ ။
ရှိပါ့ ဗျာ ။ ဒီမှာက မိန်းမကိုပဲ အရေးယူပြီး ယောက်ကျားကလွတ်တယ်
ဒီတော့ မမျှတတဲ့  စီရင်မှုကြောင့်ပိုဆိုးကုန်ပါတယ်
ကျနော် ပိုစ့် တစ်ပုဒ်ရေးချင်ပါသေးတယ် ။ သူတို့ ဘဝ
ူသူတို့ အကြောင်း ဆိုပြီးတော့ ပေါ့…..
မြန်မာနိုင်ငံ က အပျိုရည်ရောင်းမယ့် မိန်းမငယ်လေးတွေအတွက်လဲ ဈေးကွက်အတည်တစ်ကျ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်
မေးကြည့်မိသမျှ ၊ စုံစမ်းမိသမျှပေါ့နော်
မြန်မာကျပ်ငွေ ၅သိန်းရတယ်ဆိုတာ တော်တော်များနေရှာပါပြီ
၅သိန်းဆိုတာ ဒေါ်လာ ၅၈၁ ဒေါ်လာကျော်ကျော်လောက် ရှိတာကလား
” မြန်မာနိုင်ငံ က အပျိုရည်ရောင်းမယ့် မိန်းမငယ်လေးတွေအတွက်လဲ
ဈေးကွက်အတည်တစ်ကျ ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ”
ကိုပေ ကို ထောက်ခံပါတယ် ။
သူများ နိုင်ငံခြားသူ မိန်းကလေးတွေတောင် လုပ် နိုင် / လုပ် ရဲ ရင် ၊
ဒို့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေလဲ ဘာလို့ မလုပ် နိုင် / မလုပ် ရဲ ရမှာတုံး ။
မိန်းကလေးချင်း အတူတူ ၊ သူတို့က ဘာအပိုပါလို့လဲ ။
ကိုပေ အဲဒီ အကြောင်းကို Post တစ်ပုဒ်တင်ပြီး ဆွေးနွေးရအောင်လေ ။
ဟီ ဟိ ၊ အဆဲတော့ တော်တော် ခံရမယ် ။
မဲပေးရလျှင် အမှန်ခြစ်ပါမည် ။
သူများနိုင်ငံမှာက ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကလဲကောင်းတယ်(ငွေရတယ်) အခြားကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် အလုပ်တွေကလဲ ကောင်းတယ်- ဒီတော့ ကြိုက်တာရွေးလုပ်လို့ ရပါတယ်။
ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာက ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်အလုပ်တွေက တစ်ခုမှ(လို့ပြောရမတတ်) မကောင်းပါဘူး။ ၀င်ငွေအရမ်းနည်းပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမှာ ပြည့်တန်ဆာပရိုမိုးရှင်းလုပ်မိရင် တနိုင်ငံလုံးဖါဖြစ်သွားမှဖြင့်…
အဲဒါကြောင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို စံနစ်တကျ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ဖြစ်စေလိုလို့ တရားဝင်လိုင်စင်ပေး နေရာသတ်မှတ် လုပ်ကိုင်စေသင့်တာကသပ်သပ်-
ဖေါဖေါသီသီ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ခွင့်ပြုသင့်မပြုသင့်က သပ်သပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်သားကို ပေးစားစရာ မကျန်တော့မှာစိုးလို့ ၀င်သတိပေးရပါကြောင်း…..
ဒီလူတွေ ဒီလိုတွေးကြမယ်ဆိုတာကြိုသိလို့ ဗိုလ်ချုပ်က ဖါနိုင်ငံဖြစ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့တာလားဗျာ..။
တဖက်လှည့်တွေးကြည့်ရရင် ကေတီဘီ မာဆပ်တွေ ပေါ်တင်
တရားဝင်ဖွင့်ပေးတော့.. အဲ့လို နေရာများ မိန်းမရှိတဲ့လူတွေ
ပေါ်တင်ဝင်သွားရင် စောင့်ဖမ်းရလွယ်မှာပေါ့.. (အိမ်ထောင်ရှိသူများကို ဆိုလိုခြင်း)
အဲ့တော့.. ပွင့်သင့်တဲ့နေရာ ပွင့်ပေါ့ဗျာ..
ခိုးစားရတဲ့ အသီးကို ပိုချိုတယ်ဆိုလားပဲ…
(I hope we might get something from below shared news, this is how they accept)
Charlie Sheen has been pictured locking lips with adult film actress Georgia Jones on New Year’s Eve.
Read more: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2257589/Charlie-Sheen-locks-lips-porn-star-Georgia-Jones-party-Mexico.html#ixzz2HD5i7xeE